ယၟုလ္ၚဝ်ဂမၠိုင် - ဝိက်ရှေန်နရဳ
wikieditor (ဝှက်ထားသော) Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂၀၅၆၉ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
OAuth CID: 2209 WikiImporter [1.3] WikiImporter isatool that lets new wiki importers to easily import new wikis from Incubator. The tool needs to import pages as well as force create users to get rid of interwiki prefix in history of imported pages (action=import needs the user to exist to assign the local user rather than an interwiki prefixed one). ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၅၃၂ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-reverted နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး Edits that were later reverted byadifferent edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၃၈၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-new-redirect ပြန်ညွှန်းအသစ် Edits that createanew redirect or changeapage toaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂၇၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mobile web edit ပလေဝ်ဒါန် ဝေပ်သာ် နကဵုဖုန် မိုလ်ဘိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂၆၈ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mobile edit ပလေဝ်ဒါန် နကဵုဖုန် မိုလ်ဘိုင်းဆိုဒ်မှ ပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှု (ဝက်ဘ် သို့ app) ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂၆၈ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
visualeditor ပလေဝ်ဒါန် မညာတ်နမတ် Edit made using the visual editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂၀၂ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-manual-revert လက်ဖြင့် နောက်ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that manually restore the page to an exact previous state ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁၄၃ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
OAuth CID: 1841 PAWS [2.1] PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁၂၉ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-undo ဟွံပ Edits that undo previous edits using the undo link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁၁၉ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
visualeditor-wikitext ၂၀၁၇ ရင်းမြစ်တည်းဖြတ် Edit made using the 2017 wikitext editor ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁၁၇ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-added-comment (ဝှက်ထားသော) A talk page comment was added in this edit ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၄၅ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
visualeditor-switched Visual edit: Switched User started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၃၆ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
massmessage-delivery MassMessage delivery Message delivery using Extension:MassMessage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၃၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
OAuth CID: 1805 SWViewer [1.4] App to monitor the recent changes ofawiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewer ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁၁ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-rollback နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ခြင်း Edits that roll back previous edits using the rollback link ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၉ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-replace ကလေၚ်ဖျေံဒၞာဲ Edits that remove more than 90% of the content ofapage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၈ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-blank ဗလာပြုလုပ်ခြင်း စာမျက်နှာတခုအား ဗလာပြုလုပ်သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၈ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-reply အကြောင်းပြန်ရန် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို ပြန်ကြားခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၄ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-source ရင်းမြစ် DiscussionTools သည် ရင်းမြစ်တည်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၄ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-source-enhanced (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbar ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၄ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools (ဝှက်ထားသော) DiscussionTools အသုံးပြု၍ တည်းဖြတ်ခြင်း ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၄ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
advanced mobile edit အဆင့်မြင့် မိုလ်ဘိုင်းတည်းဖြတ် အဆင့်မြင့်ပုံစံနှင့် အသုံးပြုသူမှ တည်းဖြတ်ထားသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
emoji အီမိုဂျီ Used by global abuse filter 110. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၂ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-removed-redirect ပြန်ညွှန်းကို ဖယ်ရှားခဲ့သည် Edits that change an existing redirect toanon-redirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁ ပြံင်လှာဲ
mw-changed-redirect-target ပြန်ညွှန်းကို ပြောင်းလဲခဲ့သည် Edits that change the target ofaredirect ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၁ ပြံင်လှာဲ
mw-contentmodelchange မာတိကာမော်ဒယ် ပြောင်းလဲမှု Edits that change the content model ofapage ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mw-server-side-upload Server-side upload Media files that were uploaded viaamaintenance script ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
centralnotice Central Notice Edit created via the CentralNotice Admin UI ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
centralnotice translation Central Notice Translation Edit of CentralNotice content created via the Translate extension ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
visualeditor-needcheck Visual edit: Check Edit made using the visual editor where the system detected the wikitext possibly having unintended changes. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
mobile app edit ပလေဝ်ဒါန် ဝေပ်သာ် နကဵုဖုန် မိုလ်ဘိုင်း app မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
android app edit အန်းဒရွိုက် app တည်းဖြတ် Edits made from mobile app for Android ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
ios app edit iOS app edit အိုင်အိုအက်စ်အတွက် မိုဘိုင်း app မှ တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
fileimporter-remote Modified by FileImporter Edits made by the FileImporter extension after successfully importingafile from this wiki. ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
disneynew disneynew ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
T144167 T144167 ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
meta spam id meta spam id ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
blanking blanking ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
OTRS permission added by non-OTRS member OTRS permission added by non-OTRS member ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
repeated xwiki CoI abuse repeated xwiki CoI abuse ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
abusefilter-condition-limit condition limit reached Edits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help). ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
disambiguator-link-added သံတူကြောင်းကွဲ လင့်ခ်များ သံတူကြောင်းကွဲစာမျက်နှာများသို့ ပေါင်းထည့်ထားသောလင့်ခ်များအား တည်းဖြတ်မှုများ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-edit ပြင်ဆင်ထားသော သုံးသပ်ချက် အသုံးပြုသူသည် ရှိနှင့်ပြီးသော သုံးသပ်ချက်တစ်ခုကို DiscussionTools ဖြင့် တည်းဖြတ်ခဲ့သည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-newtopic အကြောင်းအရာအသစ် အသုံးပြုသူသည် DiscussionTools ဖြင့် အကြောင်းအရာသစ်တစ်ခုကို စာမျက်နှာသို့ ပေါင်းထည့်ခဲ့သည်။ ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
discussiontools-visual မျက်မြင် DiscussionTools သည် မျက်မြင်တည်းဖြတ် ဖြစ်နေသည် ဆော့ဝဲလ်မှ သတ်မှတ်ထားသော ယွံ ၀ ပြံင်လှာဲဂမၠိုင်
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/wiki/တၟေင်:လိက်စာမ်ဂမၠိုင်"